အယျဒီတာ့သငျပုနျး -ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အယျဒီတာ့သငျပုနျး -ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၉
အယျဒီတာ့သငျပုနျး -ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၉
Posted by kai on Nov 27, 2019 in Contributor, Columnist, Editor's Notes, Myanmar Gazette | 1 comment
Baby Boomer(၁၉၄၆-၁၉၆၄)(ယခုအသကျ၅၅-၇၃နှဈ)မှေးမြိုးဆကျကိုခေါျဆိုသညျ။ ကမ်ဘာအနှံ့တှငျထိုမြိုးဆကျတို့သညျ စဈပွီးခတျေမှေး၍ပွာပုံဘဝမှနိုငျငံကို တိုးတကျအောငျကွိုးစားခဲ့ကွသညျ။ သို့နှငျ့ယခုတိုးတကျသောနိုငျငံကွီးမြားကိုမွငျရပါမညျ။
အမရေိကား(ထရမျ့ -၁၉၄၆)အပါအဝငျ ရုရှား(ပူတငျ-၁၉၅၂)။ ခြိုငျးနား(ရှီ-၁၉၅၃)။ ဂပြနျ(အာဘေး-၁၉၅၄)။ ဂြာမဏီ(မာကယျ-၁၉၅၄)။ ယူကေ(ဂြှနျဆငျ-၁၉၆၄)။ အိန်ဒိယ(မိုဒီ-၁၉၅၀) စသညျ့ကမ်ဘာ့နိုငျငံကွီးမြား၏ ထိတျတနျးခေါငျးဆောငျမြားသညျ ဘဘေီဘုမျမာမြိုးဆကျမြားဖွဈကွ၏၊ တိုငျးပွညျတို့ကိုလညျး နိုငျနငျးစှာအုပျခြုပျခဲ့/အုပျခြုပျနနေိုငျပါသညျ။ သမ်မတကလငျတနျ။ဘုရျှနှငျ့အိုဘားမားတို့သညျဘဘေီဘုမျမာဖွဈသညျ။ သူတို့နောကျဆုံးမြိုးဆကျနားနီးလာလေ ထိုငျခုံမှမဆငျးလသေဘောပငျမွငျကွရမညျ။ ယခုခတျေအမရေိကကှနျဂရကျနှငျ့ စိနိတျတှငျ ဘဘေီဘုမျမာ နောကျဆုံးနှဈလကျကနြျသမား အမြားဆုံးရှိနကွေသညျ။ ယခု၂၀၂၀
ဒီမိုကရကျပါတီမှ ဖွဈနိုငျခြရှေိသမ်မတလောငျးမြားတှငျ ဘလုမျးဘတျ(၁၉၄၂)။ ဘိုငျဒငျ(၁၉၄၂)။ ဘာနီဆနျဒါဈ(၁၉၄၁)တို့သညျ Silence Generation(၁၉၂၅-၁၉၄၅)(ယခုအသကျ၇၄-၉၁)ဖွဈသညျ။ အဲလိဇဘကျ(၁၉၄၉) ကမလာဟဲရဈ(၁၉၆၄)သညျဘုမျမာဖွဈသညျ။
ဘဘေီဘုနျမာတို့သညျ အလုပျ၂ဆ-၃ဆတိုးလုပျခဲ့ကွရသညျ။ သကျကွီးပငျစငျအတှကျလညျး ကနြျးမာရေး။ပငျစငျလစာနှငျ့ လူမှုဖူလုံရေးမြားအတှကျလညျးကွိုတငျကွံဆပွငျဆငျထားကွပါ၏။ သို့နှငျ့နောကျကပျရကျမြိုးဆကျမြားရှာသမြှကို ထိုငျသုံးမညျ့သူမြားလညျးဖွဈသညျ။ ထိုသဘောကို ဂပြနျနိုငျငံတှငျ တိုး၍တကျမြားလာနသေော ဖိုးသကျကွီးပငျစငျစားမြားနှငျ့အလုပျလုပျသူအခြိုး Age dependency ratio(၆၇.၄၃%)အားဖွငျ့မွငျနိုငျသလို တိုငျးပွညျ၏ဝနျထုတျဝနျပိုးပငျဖွဈလြှကျနပေသေညျ။ သူတို့စိုကျခဲ့သလို ရိပျသိမျးသညျကားမဟုတျ။ နောကျမြိုးဆကျစိုကျသညျကိုပါ ဝငျရိပျနိုငျအောငျ စနဈခြ စနဈတကပြွငျဆငျခဲ့ကွသညျ။ ပငျစငျယူပွီးခြိနျအတှကျ လိုအပျနိုငျသမြှကို အကုနျအကှကျခခြဲ့အုပျမွဈခခြဲ့ပွီးပွီ။ ဘာကိုပူနကွေပါသနညျး။ နောကျမြိုးဆကျကိုနရောမပေးပဲ ထိုငျခုံနှငျ့ အာဏာရသကျတမျးတို့ကိုဆှဲဆနျ့နခေငြျကွသေး၏။
ထိုနောကျမှကပျရကျမြိုးဆကျမှာ Generation X(Xer)ဖွဈသညျ။ (၁၉၆၅-၁၉၈၀)(ယခုအသကျ၃၉-၅၄နှဈ) ဖွဈကွသညျ။ ဘုမျမာတို့ရှေ့မြိုးဆကျဆိုငျးလနျ့ဈ၏သားသမီး/မွေးနှငျ့ စဈပွီးခတျေဘုမျမာတို့သားသမီးတို့ဖွဈကွသညျ။ ဘာလငျတံတိုငျးနှငျ့ဆိုဗီယကျယူနီယံ ကှနျမွူနဈနိုငျငံ‌ရေးစနဈကွီးမြားကိုဖွိုနိုငျခဲ့သညျ့ တိုငျးပွညျပွောငျးမြိုးဆကျပါ။ ထို့အပွငျ OKသမားအဆငျပွငွေိမျးခမြျးကွိုကျ အနုပညာခတျေစမျးမြိုးဆကျတညျး။
ယခု ၂၀၁၉တှငျခတျေစားလာသော စကားတခှနျးရှိ၏။ OK Boomer ဟူသတတျ။
မွနျမာလို “ဟုတျပ ဘိုးတောျ”ဟု သကျကွီးကို ရှဲ့တှနျးပွောသညျနှငျ့တူသညျဆိုရမညျ။
OK Boomer သညျ Millennial(Gen Y) (၁၉၈၁-၁၉၉၆)(ယခုအသကျ၂၃-၃၈နှဈ)မြိုးဆကျမှ TikTok မှအစပွု ဘုမျမာမြိုးဆကျသို့ခနဲ့ဟာသလုပျဆိုစကားဖွဈသညျ။
သားသမီးနှငျ့မိဘ သကျကွီးနှငျ့သကျငယျ ကှာဟမှုအပွငျ ကှနျပွူတာ/အငျတာနကျ Industry 3.0(i3.0) (၁၉၆၉-၂၀၀၉)ခတျေကောငျးမိသှားကာခုနျတကျသှားသော i 4.0 (၂၀၁၀-ယခု)သမားမြားနှငျ့ ရှေးအတှေးအခေါျတို့ ထိပျတိုကျသှားတှေ့သညျဟုလညျးပွောရမညျ။ ဘုမျမာတို့၏ ကောငျးခကြျထကျဆိုးကှကျတို့ကို တိုကျရိုကျထမျးရမညျ့မြိုးဆကျလညျးဖွဈသညျ။ ခမျးခွောကျလာပွီဖွဈသော လူမှုဖူလှုံရေးစုဆောငျးငှမြေား၊တောကျလြှောကျတကျ တငျနသေောနိုငျငံတောျအကွှေးမြားကို ခါးစီးခံရမညျမြိုးဆကျလညျးဖွဈသညျ။ ကောလိပျတက်ကသိုလျအကွှေးလယျပငျးနဈမညျ့သူမြားလညျးဖွဈသညျ။ တညျငွိမျလာသညျ့နိုငျငံရေးနှငျ့ကမ်ဘာစီးပှားရေးပေါျတှငျ AI, IoT စီးနငျးဆကျသှားမညျ့ မြိုးဆကျလညျးဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာရှာသမားမြားလညျးဖွဈသညျ။
ကွားမှ Xer တို့သညျ မိဘနှငျ့သားသမီး ကှနျဆာဗေးတဈနှငျ့ လဈဗရယျကွား ညပျနသေညျ့ ဆငျးဒဝရျှမြိုးဆကျဖွဈလာသညျ။ ယခုဟောငျကောငျ၏ သူပုနျထလှုပျရှားမှုဦးဆောငျတို့မှာ မီလနျနီရယျမြားဖွဈကာနှိပျကှပျသူတို့မှာ ဘုမျမာမြားဖွဈပါသညျ။ Xer တို့သညျမှာ မသိလိုကျဖာသာ။
ကမ်ဘာဥတုရာသီ ယခုနှဈပိုငျး အပွောငျးကွမျးပွလှနျးရကား ကပျဆိုကျနပွေီဆိုရမညျ။ သို့သောျ ထိုထိုသော မီးခိုးငှေ့/ဓာတျသဘာဝတို့ဖွဈအောငျဖနျတီးထုတျလုပျရာ၌ အဓိကတာဝနျရှိသူi2.0 သမားတို့မှာ ဝနျမခံ။ ထပျတှနျးထုတျနပေရော ဆှိဒဈရျှဆယျကြောျသကျဂရတောသှနျးဘတျဂျ(Gen Z)(၁၉၉၇-)(ယခုအသကျ၂၂အောကျ)မှ How dare you! ဟုပငျ ကုလသမဂ်ဂတကျ၍ ကွိမျးမောငျးခွငျးခံလိုကျကွရ၏။ သူတို့ခတျေတှငျ ကနြျရဈမညျ့ကမ်ဘာမွသေညျ ယခုအတိုငျးသှားပါမူ ယိုယှငျးပကြျဆီးမှုမြားလှမညျ။ နောငျအနှဈ၅ဝတှငျ ဤကမ်ဘာမွမေညျသို့ ပကြျဖွဈကနြျရဈနမေညျကို မညျသူမြှ တိတိကကြမြသိ။ သိလညျး ပွငျကွပုံကားမပေါျ။ မပေါျသညျ့အပွငျအမရေိကားသညျ Accord de Parisမှ တရားဝငျပငျနှုတျထှကျလိုကျပွီဖွဈပါသညျ။ ဘုမျမာမြိုးဆကျသမ်မတကွီးထရမျ့မှဦးဆောငျနသေညျ့ အုပျခြုပျ‌ရေးမဟုတျလော။ ထပျ၍ပငျ ရနေံတှငျးမြားကြောကျမီးသှေးမိုငျးမြားတူးဖေါျထုတျ မီးပငျတငျရှို့သားကောငျခနြငျးပွလိုကျပေဦးမညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျလညျး မြိုးဆကျတို့ဆကျဆံရေးကှာခခြကြျအားကွီးလှနျးသညျ။ ဘုမျမာတို့သညျ ဘာသာရေးကို စှဲကိုငျထားမှုအားကောငျးလှနျးရကား ရှေးရိုးစှဲခွငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ မဇ်ဈိမပဋိပဒါသှားဖွဈနပေါသညျ။ ဤသူကိုယျတိုငျပငျ နိုငျငံရပျခွားတှငျ အသကျတဝကျထကျပိုနခေဲ့ရကား လဈဘရယျမြားဖွဈမညျလားဟု questionnaire မေးခှနျးအဖွနှေငျ့စဈတမျးထုတျဖူးပါသညျ။ ရှေးရိုးစှဲမွဲပါသတဲ့။
ထိုသဘောအရကောကျလြှငျ အမရေိကားရောကျမွနျမာအမြားစုကွီးမှာလညျး ကှနျဆာဗေးတဈမြားမညျ။
မဝေးသေးလှသော သမိုငျးကွညျ့လြှငျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ စဈအာဏာရှငျတို့ကို ဖွုတျခြ၍ ယခုအခွရေောကျအောငျအဓိကလုပျခဲ့သူမြားမှာ ၈၈မြိုးဆကျဟုခေါျသော ၁၉၈၈က တက်ကသိုလျကြောငျးသားအရှယျမြားဖွဈကွ၏။ ထိုခတျေ၏ စကျမှုတက်ကသိုလျ/ရနျကုနျတက်ကသိုလျ/ကောလိပျရောကျကြောငျးသားအမြားစုတို့သညျ ၁၉၆၅-၇၁ဖှားမြားဖွဈ၏။ တိတိကကြဆြိုရလြှငျ Xerမြားဖွဈပါသညျ။
မဆလပွုတျပွီးနောကျ နဝတ/နအဖခတျေတို့တှငျ Xerဘဝခါးလှသညျ။ ကြောငျးမြားပိတျထား၍ဟိုလညျးမရောကျဒီလညျးမဖွဈ ငှကျဖြားတောထဲသှားတိုးကာလကျနကျကိုငျ၍ပငျတောျလှနျခဲ့ကွသညျ။ ထိုမှ နယျစပျ ပွောငျးခိုသူစခနျးမြား။တတိယနိုငျငံမြားအထိခွဆေနျ့သှားနိုငျပါသညျ။
ဦးနဝေငျး၏မဆလအစိုးရပွုတျကဩညျ။ နဝတတကျလာသညျ။ နအဖပွောငျး၏။ ဦးခံ ဗိုလျခြုပျကွီးသိနျးစိနျ အစိုးရနှငျ့ နောကျဆုံးတှငျ ယခု ‌ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျ၏NLD အစိုးရကိုမွငျကွရမညျ။
မညျသို့ ဖွဈခဲ့/လုပျခဲ့ကွသညျဖွဈစေ အဆုံးသတျဆုံးဖွတျနိုငျသညျ့ရလဒျမှာ ကောငျးသဖွငျ့ The end justifies the means. တောျလှနျရေးကွီးအောငျသညျဆိုရပမေညျ။
တရားမြှတသောရှေးကောကျပှဲဖွငျ့ မဲအသာရတကျလာသော NLD အမတျအမြားစုတို့မှ အစိုးရဖှဲ့နိုငျခဲ့သညျမဟုတျပါလော။
၁၉၈၈မှစခဲ့သော အရေးတောျပုံသညျ ၂၀၁၅တှငျ လူထုအမြားစုတငျမွောကျသောအစိုးရအာဏာရအုပျခြုပျနိုငျခွငျးနှငျ့အတူ (တဖွတျ)ပွီးမွောကျအောငျမွငျခွငျးရောကျပါသညျ။
NLD ပါတီထိပျတနျး အစဥျအဆကျခေါငျးဆောငျတို့မှာ ဆိုငျးလနျ့ဈနှငျ့ဘုမျမာမြားဖွဈပါ၏။ မွနျမာနိုငျငံကိုယခုအုပျခြုပျနသေူ အစိုးရမှာ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့(၁၉၅၁)နှငျ့ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျ(၁၉၄၅) အပါအဝငျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားမှာအသကျ၇ဝတနျးခညြျးနှငျ့ ဘုမျမာနောကျဆုံးနှဈ သမားမြားပါ။ Xerတို့၏သှေးခြှေးစတေး၍ရခဲ့သော တောျလှနျရေး၏အသီးအပှငျ့မြားကို စားသုံးခဲ့သညျပါ။
Xer တို့သညျ တိုငျးပွညျ့အာဏာရလာသော ဒီခြုပျအစိုးရကိုမှု လုပျဖေါျကိုငျဖကျသဘောဖွဈသဘောထား တိုကျသညျမရှိ။ နှေးတုံ့ပေးခဲ့ အခြိနျစောငျ့ခဲ့ပါသညျ။ သို့ငွား.. ဘုမျမာအမြားစုအစိုးရသညျ Xer တို့ကိုပွနျမကွညျ့ဟုပငျဆိုရမညျ။ အခွခေံဥပဒလေညျးမဟုတျမူသော ဦးနဝေငျးစိတျကွိုကျရေးဆှဲသှားသညျ့ သာမာနျ ၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒကေို ဘုမျမာအစိုးရက အသုံးခြ၍ ကနျထုတျခွငျးပငျခံရသတညျး။
၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒသေညျ ခတျေလညျးမမှီ၊ တိုငျးပွညျရှိမွဲ အခွခေံဥပဒေ(တို့)နှငျ့လညျး ဆနျ့ကငြျconstitutional crisis ဖွဈနသေဖွငျ့ ပွငျရနျအခြိနျသငျ့လှနျးမက လှနျနပေါပွီ။ အစိုးရတရပျသညျ မှေးရာပါတိုငျးရငျးသားကို နိုငျငံသားအဖွဈမှအလိုအလြောကျရုတျသိမျးနိုငျသလော? အစိုးရတရပျသညျ ဘာသာ/လူမြိုး/အခွားနိုငျငံသားအမညျမြားကို ကဒျပွားတခုတှငျ ထညျ့ရေးလိုကျကာ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျပွား(စိစဈဆဲ)ဟု အမညျတပျ၊ မူလသုံးခေါကျခြိုး အမြိုးသားမှတျပုံတငျတို့ကိုဖကြျသိမျးနိုငျသော အာဏာရှိပါသလော? Xer တို့မညျသညျ့အကွောငျးကွောငျ့ နိုငျငံစှနျ့ခှာခဲ့ရသညျထငျပါသနညျး။ နိုငျငံရေးအရတခုထဲမဟုတျ။ နှဈရှညျကြောငျးပိတျ ပညာရေးခါးဆကျမပွတျရနျ ခတျေအခွအေနမှေရုံးထှကျ၍ မိသားစုနိုငျငံကိုအလုပျအကွှေးပွုရနျ ပွညျပထှကျခဲ့ကွခွငျးမဟုတျလော?
လကျတှေ မွပွေငျအခွအေနမှော နယျစပျဒသေနတေိုငျးရငျးသားမြားသညျလညျး နယျစပျကူး၍သှားလှယျသော အိမျနီးခငြျးနှငျ့အခွားနိုငျငံမြားတှငျ သှားရောကျပညာသငျရသညျ။ စီးပှားရှာအလုပျလုပျရသညျ။ တဆငျ့တကျ၍ နထေိုငျခှငျ့နှငျ့လူသားဆနျစှာအိမျထောငျကြ အဆိုပါနိုငျငံသားအဖွဈခံယူကွသညျလညျးရှိသညျ။ US, UK သို့လညျး အဆိုပါနိုငျငံပတျဈပို့မြားနှငျ့ခရီးသှားလာ စီးပှားရှာပညာသငျကွသညျ။ ဘဝပေးအခွအေနအေရ Survival of the fittestလညျးပါသညျ။ ထိုမှေးဖှားမူလအခှငျ့အရေးမွနျမာတိုငျးရငျးသားဖွဈပွီးသူမြားကို သာမနျဥပဒတေခုဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားအဖွဈမှရုတျသိမျးနလေသေညျ။
Xer တို့သညျဘဝပညာလညျးစုံသညျ။ အတနျးပညာလညျးသငျထားကွသညျ။ အခြို့ မာစတာ/ဒေါကျတာအဆငျ့ထိသို့‌ရောကျကွကုနျသညျ။ အခြို့ လုပျငနျးကွီးမြားကို ဦးစီးနသေညျ။ မီလီယနျဒေါျလာ စီးပှားရေးမြားလုပျနိုငျကွသညျ။ အားကစားတှငျ ထူးခြှနျသညျ။ အနုပညာတှငျ ကမ်ဘာတနျးရောကျသညျ။ ထိုအခွအေနရေောကျအောငျ မှေးဖှားရာနိုငျငံတောျမှ စိုကျထုတျစရိပျတပွားမှမပေးထား/ မကုနျ။ ဟနျမကလြော?
ခြိုငျးနား။ဗီယကျနမျတို့သညျ တိုငျးပွညျမှအကုနျအကခြံကာ ပညာတောျသငျလှတျကွရသညျ။ ထိုမှလှဲ၍ မိမိအစီအစဥျနှငျ့ နိုငျငံပွငျပ‌ရောကျမြားကိုလညျး တိုငျးပွညျ အဟုနျမွှငျ့တညျထောငျခြိနျတှငျ ကောျဇောနီနှငျ့ကွိုခဲ့ကွသညျ။ စား‌ရေးနရေေးထိုငျရေးအထူးအခှငျ့အရေးပေးခဲ့သညျ။
မွနျမာအိမျနီးခငြျး ထိုငျး။ အိန်ဒိယတို့သညျ သူတို့လူမြိုဇာတိနှယျမြားကို အထူးအခှငျ့အ‌ရေးပေး ဗီဇာစနဈရှိသညျ။ ဘငျ်ဂလားဒေ့ရျှတှငျ ကမ်ဘာဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံသားခံယူသူတို့အတှကျ ပူးတှဲနိုငျငံသားစနဈရှိသညျ။ ပူးတှဲနိုငျငံသားစနဈကို ကမ်ဘာတှငျ နိုငျငံပေါငျး ၇ဝ ကြောျကငြ့ျသုံးနပွေီး ထိုနိုငျငံအားလုံးလိုလို ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားဖွဈကွသညျ။ အတုမယူသငျ့သလော?
တိုငျးပွညျလညျး”နာ”သှားရနျမရှိ၊ “သာ”ရနျသာရှိသညျ့ မွနျမာနိုငျငံပွငျပရောကျ မွနျမာနိုငျငံသား၈၈မြိုးဆကျမြားကို ပွနျလကျခံပါ။ ယခုကဲ့သို့အ‌ခွအေနမြေိုး သမိုငျးတှငျလညျးနောကျအခါတပါးမရှိနိုငျ။ တိုငျးပွညျအတှကျ သားရှအေိုးထမျးသညျ့ တခါတညျးသောအခှငျ့အရေးသာဖွဈပါ၏။ Xer ကိုနရောပေးပါ။ မီလနျနီရယျနှငျ့ တှဲအလုပျအကွှေးပွုပါစေ။ ခေါငျးဆောငျတာဝနျမြားစ,လှဲပါ။ သငျကွား/လေ့ကငြ့ျပေးပါ။ ထိုသူတို့သညျ သငျတို့မြိုးဆကျအနာဂတျဖွဈသညျ။ တိုငျးပွညျ့အနာဂတျဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ၏ပွဿနာကွီးမြားမှာ အပေါျမြိုးဆကျသညျ အောကျမြိုးဆကျ(လူငယျ/ရှယျ) တို့ကို အနန်တော၊အနန်တကြေးဇူးရှငျကွီးမြားသဖှယျ ဖိနှိပျလှနျးလှ အပေါျစီးယူလှနျးလှ၍ ရုနျးကနျထကွှခွငျးဖွဈသညျ။
တပျမတောျတှငျလညျး ကိုယျထုတျခဲ့သညျ့ စဈဥပဒမြေားအတိုငျး လိုကျနာအနားယူပါ။ နောကျလူတို့ကိုနရောပေးပါ။
ယခုခတျေစဈပှဲတို့သညျ ရဲရငျ့တကျကွှ သူရသတ်တိတို့ထုတျပွ “ကြား”ထိုးစဈတိုကျခတျေလညျးမဟုတျပါပေ။ ဦးနှောကျနှငျ့ကစားရသော စဈရေးဖွဈလာပါပွီ။ ဓနအငျအား လကျနကျပါဝါနှငျ့နညျးပညာပွိုငျရသော စဈရေးဖွဈသညျ။ အမရေိကနျ အထူးတပျသားတစုသညျ လုံခွုံလှပါသညျဆိုသော ဒသေနိုငျငံ(တို့)တှငျ ပုနျးကှယျခိုလှုံနသေူ ဘငျလာဒငျနှငျ့ ဘဂျဒါဒီ တိုကို့ နအေိမျ-အိပျယာထဲအထိအရောကျသှားက မကြျနှာခငြျးဆိုငျတိုကျရိုကျပဈသတျခဲ့နိုငျသော ခတျေဖွဈပါသညျ။ ယခုခတျေစဈတှငျ အကာအရံမရှိ အကှာအဝေးမပေါျ ။
နိုငျငံရေး/လူမှု‌ရေး ပွဿနာကွီးမြားဖွရှေငျးရနျနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးခတျေသို့အရောကျလှမျးရနျ i 3.0 နှငျ့ i 4.0 ထိုထိုခတျေတို့ကိုဖနျတီးမောငျးနှငျနသေူမြား၏မြိုးဆကျသာလိုသညျ။
OK Boomer ဟုတျကဲ့ပါ၊ဘှားတောျ။ ဘေးဖယျပါ။
အယာတိုလာမူလာသဂြီး ၇၈၆ဥမာမု အနော့ျမှတျမိလ… သားသားကွောငျကွီး ပြံလာဗီ၊ ဥမာမု ဖှကျဆရာရှိနှာ ဖှကျထား